Umshado weCasa Quinta Mary Suite - I-Airbnb
Umshado weCasa Quinta Mary Suite
Tecolutla, Veracruz, i-Mexico
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Ale
U-Ale Ungumbungazi ovelele
Igumbi elihle, elibanzi kakhulu futhi elinethezekile, lilungele ukuphumula kombhangqwana, lapho ufika uzothola ukuthi lihlanzeke ngokuphelele futhi linesiqinisekiso sokuthi sithatha izinyathelo zokuphepha ezengeziwe ngokubulala amagciwane ezindaweni ezivame ukuthintwa.
Ngaphezu kwalokho, ingadi yethu ikuvumela ukuba ube nokuhlala okuphumuzayo ukuxhumana nemvelo.
Indawo yaseTecolutla yedolobha.
E-Casa Quinta Mary sithanda ukuthi zonke izivakashi zethu zibe nendawo yokuhlala ejabulisayo, indlu iyindawo enhle kakhulu yokuphumula njengoba izungezwe ingadi enhle endaweni ethule; kuhle uma nifika njengomndeni futhi nifuna ukuvakashela ogwini lolwandle, imihlume yethu emihle, nidle ukudla kwasolwandle okumnandi noma nihambe edolobheni nganoma yisiphi isikhathi.
Sicela usicele ngomusa ukuthi ufunde yonke imininingwane nezinqubomgomo zethu.
IZIKHALA EZIKHETHEKILE: Sinenhlangano yezikhathi ezikhethekile engadini yethu, icele yona.
I-PETS: E-Casa Quinta Mary sinenyama yenkukhu ehlobisa ingadi yethu futhi ngesikhathi esifanayo isisize ekuhlanzeni kwayo, sihambisana no-Matías omuhle oyisilwane sethu esifuywayo esinoboya, isilwane esifuywayo segolide esineminyaka engu-10 ubudala esinesilwane esithambile. uhlamvu.
IZINDAWO EZIJWAYELEKILE: Sinegumbi lokudla kwasekuseni langaphandle lapho unganambitha khona ikhofi elimnandi le-Veracruz; Engadini yethu enhle ungakwazi ukuphumula kuma-hammocks noma ujabule ekujikeni, sine-barbecue enkulu lapho ungabelana khona nomndeni wakho, ukuze ududuzeke sinendlu yangasese endaweni yengadi.
4.95 · 128 okushiwo abanye
Indawo yethu yinhle kakhulu, siyibhlokhi elilodwa ukusuka ku-main pier, amabhlogo amahlanu ukusuka ogwini kanye namabhulokhi amathathu ukusuka e-zocalo. Indawo imaphakathi futhi iphephile noma nini.
E-Casa Quinta Mary singabantu abanobungane futhi abafinyeleleka kalula futhi sizotholakala ukuze sinikeze usizo izivakashi zethu uma zikudinga, ngesikhathi esifanayo sithanda ukuhlinzeka nokwamukela ubumfihlo phakathi nokuhlala kwazo esimweni sokuzwana.
Lapho samukela izivakashi zethu, sizokuhlonipha ukuqhelelana okunconyiwe, sigweme ukuxhawulana, futhi sizoziqondisa mathupha egumbini lazo ukuze sizinikeze imiyalelo efanele yokuhlala kwazo ngokunethezeka e-Casa Quinta Mary.
E-Casa Quinta Mary singabantu abanobungane futhi abafinyeleleka kalula futhi sizotholakala ukuze sinikeze usizo izivakashi zethu uma zikudinga, ngesikhathi esifanayo sithanda ukuhl…
UAle Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Tecolutla namaphethelo